Izindlela Zokulawula Ukukhanya Okukhanyayo kwe-Smart LED
I-Smart LED Linear Light Control Ways Ngokuthuthuka kobuchwepheshe obuhlakaniphile, manje sesinezindlela ezahlukahlukene zokulawula emkhakheni wokukhanyisa. Namuhla sizokuthatha ukuthi ubheke izindlela zokulawula ukukhanyisa ezihlakaniphile. Ukulawulwa kokuthinta okuhlakaniphile Kubasebenzisi abajwayele ...
Ungayikhetha kanjani i-LED Loght
Eminyakeni embalwa edlule, ukusetshenziswa kwe-LED emkhakheni wokukhanyisa sekukhule kakhulu, futhi amalambu e-LED abelokhu ethula njalo amasha, ngezitayela ezahlukahlukene, futhi abe yindawo enhle ezimpilweni zethu. Ngakho-ke, ungakhetha kanjani isibani esifanele se-LED? Vele, wonke umuntu b ...
i-aluminium alloy channel iholele ukukhanya komugqa
1. Siyini isiteshi se-aluminium ingxubevange eholele umugqa we-strip light aluminium alloy led led strip light = i-aluminium alloy channel + eyakhelwe ngaphakathi kwe-strip ye-LED + namandla wangaphandle wedrayivu. Uma kuqhathaniswa namalambu we-fluorescent aqediwe we-LED, amalambu we-aluminium alloy aholele emigqeni ikakhulu ayingcweti yemikhiqizo yobunjiniyela, whic ...